भ्रष्टाचार मौलायोः देउवा – News Portal
भ्रष्टाचार मौलायोः देउवा
फिचर मुख्य खबर राजनीति
September 15, 2019 epradeshLeaveaComment on भ्रष्टाचार मौलायोः देउवा
तुलसीपुर, २९ भदौ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले कामभन्दा कुरा धेरै गर्ने गरेको बताएका छन् । दाङको तुलसीपुरमा विपीको सालिक अनावरण गर्दै सभापति देउवाले सरकारले कामभन्दा कुरा धेरै गर्ने गरेका कारण जनताको विश्वसनीयता गुमाउन थालेको बताए । ‘सरकार आफ्नै कारण संकटमा पर्न थालेको छ, हामीले खबरदारी गर्नै पर्दैन्,
आफ्नै गतिविधिले सरकार आफै अप्ठेरोमा परेको छ’ उनले भने ‘जनताले नुन खान पाएका छैन्, सरकारले सुनका कुरा गर्छ । उनले दुई तिहाईको सरकारबाट जनताले विकास निर्माणका कामभन्दा महंगी र भ्रष्टाचार पाएको आरोप लगाए ।
‘देशमा जनता महंगीको मारमा छन्, भ्रष्टाचार तल्लो निकायसम्म पुगेको छ’ उनले भने ‘सरकारले यस्तै गतिले आफै संकटमा पर्नेछ, प्रतिपक्षले भन्दा पनि जनताले नजिकबाट सरकारका गतिविधि नियालेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले सहरदेखि गाउँसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै अब सरकारका खराब कामको भण्डाफोर गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘सुशासन छैन्, नागरिक पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचारको दलदलमा छन्,
उनले भने ‘म पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई के आग्रह गर्छु ? भने सरकारका गलत कामको भण्डाफोर गर्नुस्, शान्ति र संविधान ल्याउने काँग्रेसको पक्षमा जनमत जुटाउनुस् ।
सभापति देउवाले जनताले राज्यलाई चर्को कर तिर्न बाध्य भएको तर विकास निर्माणका गति भने सुस्त रहेको बताए । ‘जनताले कर तिरेअनुसारको विकास पाउन सकेका छैनन्, सरकारका गतिविधिका कारण नागरिकमा वितृष्णा जागेको छ’ उनले भने
‘सरकारकै कारण ठूलादेखि साना योजनामा पनि कमिशन, भ्रष्टाचार, बेतिथि मौलाएको छ, अब काँग्रेस चुप लागेर बस्ने छैन् । नेकपाको दुई तिहाइको सरकार जनताका भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी पार्न लागेको आरोप उनले आरोपसमेत लगाए ।
‘कार्यकर्तालाई आसेपासेलाई खुशीभन्दा पनि जनतालाई खुशी बनाउन सके सरकारको आयु पनि बढ्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन् ।
सभापति देउवाले बाँकेमा काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि नै सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको घटनाको निन्दासमेत गरेका छन् ।
उनले काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि नै आक्रमण हुँदा प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै जनताको सुरक्षामा सुरक्षा प्रशासन पनि गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । देउवाले काँग्रेसको दोस्रो जागरणले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकतावद्ध गर्ने बताए ।
उनले विपीले लिएको मेलमिलापको सन्देशलाई शिरोधार्य गरी राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आग्रहसमेत गरे । सालिक अनावरण कार्यक्रममा पूर्व सिंचाई मन्त्री दिपक गिरीले दाङको विकासमा नेपाली काँग्रेसले गरेको योगदान जनता आफैले मूल्यांकन गरेको बताए ।
‘हाम्रो सरकार हुँदा दाङमा के कति विकास भए हामीले भन्नुभन्दा पनि जनताले आफै मूल्यांकन गरेका छन्’ उनले भने ‘जनताका समस्या समाधानमा पार्टी उहिले पनि लाग्यो, अहिले पनि छ ।’
त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ का सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले पार्टीमा सबैलाई एकतावद्ध गराई जनतामा विकास र समृद्धि लैजाने बताए ।
‘सरकारका गलत कामको खबरदारीमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर छैन्, हामी अब झनै सशक्त भएर जानेछौँ उनले भने ‘हामीलाई सडकमा जान नपारियोस् ।’ राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुन्न छोडेको बताइन् ।
‘दुई तिहाइको दम्ब नदेखाइयोस्, प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने वातावरणको निर्माण होस्’ उनले भनिन् ‘दम्बले हामी होइन् आफैलाई बढी खतरा छ ।
त्यस्तै जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता एकजुट भएर बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
‘नेता तथा कार्यकर्ता एक भएर आउँदो उपनिर्वाचनमा मत हाम्रो पक्षमा ल्याउन हामी लागेका मात्र छैनौँ जनता पनि हाम्रो साथमा छन् उनले भने । कार्यक्रम क्षेत्रीय सभापति जगत खड्काको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव चूर्ण बहादुर चौधरीले गरेका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशमा फेरि राजा फर्किन्छ भन्नेहरु मूर्ख भएको बताएका छन् । राजसंस्था र राजा फर्कदैनन्, उनले भने, मुलुकमा फेरि राजा फर्किन्छ भन्नेहरू मूर्ख नै हुन् । नेपाल प्रेस युनियन दाङले तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले राजा फर्काउने पक्षमा काँग्रेस नरहेको र त्यो कुनै छलफलसमेत नभएको बताए । राजा फर्किन्छन् भन्ने तर्क गर्ने मूर्ख भएको उनले बताए ।
देउवाले जनताको ठूलो संघर्षबाट फालिएको राजतन्त्र अब फर्कन नसक्ने र राजतन्त्रको पक्षका काँग्रेस पनि नभएको बताए । ‘जनताले फालिसकेको राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा काँग्रेस छैन’ उनले भने, ‘राजतन्त्रको बारेमा कसैले नसोचे हुन्छ ।
देउवाले काँग्रेसको जनजागरण अभियानको सफलता देखेर कम्युनिस्टहरुले बाँकेको कार्यक्रममा आक्रमण गरेको आरोप लगाए । शान्तिपूर्ण रूपमा सभा समारोह गर्न पाउने अधिकार सबैमा रहेको र त्यसैको लागि काँग्रेस सात सालदेखि अनवरत लड्दै आएको बताए ।
त्यसका लागि काँग्रेस पार्टीको एकता आवश्यक रहेकोसमेत बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरीको पछिल्लो कार्यको भने खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा प्रहरी डराउन नहुने उनले बताए । ‘प्रहरी राष्ट्रको हो, जनताको हो, कुनै दलको होइन । जनताको करबाट तलव खाने प्रहरी जनताकै लागि सेवा गर्नुपर्छ उनले भने, प्रहरी राष्ट्र र जनताप्रति बफादार हुनुपर्छ । कसैको दवाव र इसारामा प्रहरी संगठनले काम गर्न नहुने बताए ।
अर्काे प्रसंगमा त्यस्तै उनले प्रदेश ५ को राजधानी दाङ किन छोडेर बुटवल तोक्नु भएको हो ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा देउवाले दाङमा राजधानी सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुँदा काम चलाउन अस्थायी रुपमा बुटवल तोकिएको हो । तत्काल काम थाल्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो त्यतिबेला उनले भने ।
तुलसीपुर ६ बालश्रममुक्त वडा
एक महिनाको छोरीसँग तराकारी व्यापार
करको विरोधमा वन महासंघ
भूमि व्यवस्थापन गर्न माग
September 4, 2018 epradesh
तुलसीकी श्रीया मेधावी छात्रा
January 10, 2020 epradesh